Imidwebo yentamo yamadoda, amathuba amaningi nezincazelo | Ukuzidweba umzimba
Imidwebo yentamo yamadoda, amathuba amaningi nezincazelo
Nathi Cerezo | | Ama-tattoo amadoda
Ama-tattoos ezintanyeni zamadoda, naphezu kokuthi atholakala endaweni ethile yomzimba, anamathuba amaningi kunalokho okubonakala. Isibonelo, zingaba yingxenye yomklamo omkhulu, zizimele, ngombala, ezimnyama nezimhlophe ...
Sizokhuluma ngakho konke lokhu nokunye okuningi kulesi sihloko mayelana nama-tattoos entanyeni amadoda., lapho, naphezu kokuthi imiklamo yenziwa ngobulili besilisa, akudingeki ukuba ikhawulelwe kulokhu. Futhi, ikakhulukazi uma unquma ukuthola tattoo kule ndawo, sincoma futhi ukuthi ubheke lesi esinye isihloko mayelana ama-tattoos entanyeni yonke, indawo eyinkimbinkimbi futhi ebuhlungu.
1 Izici zama-tattoos entanyeni
1.1 Ubuhlungu balama tattoo
1.2 Zivame ukunyamalala kalula
1.3 Kuthatha isikhathi eside ukuphulukisa
1.4 Ingabe kunconywa ama-tattoo entamo amadoda?
2 Izindawo ze-tattoo entanyeni
2.1 Ngaphambili kwe-
2.2 Ngokuhamba kwesikhathi
2.3 Ngemuva kwendlebe
2.5 Ngaphansi kwesilevu
3 Izinhlobo zama-tattoos entanyeni amadoda
3.1 Umklamo omncane owodwa
3.2 Umklamo owodwa omkhulu
3.3 Izingxenye ezincane ezihlukahlukene
Izici zama-tattoos entanyeni
Imidwebo yentamo, ngakho-ke imidwebo yentamo yamadoda, babe nochungechunge lwezimpawu ezibenza bahluke futhi bahluke kwamanye ama-tattoos, ikakhulukazi endaweni atholakala kuyo. A) Yebo:
Ubuhlungu balama tattoo
Ama-tattoos ezintanyeni abuhlungu kakhulu, empeleni, ingenye yezindawo ezibuhlungu kakhulu zokudweba. Ngokuthakazelisayo, futhi Nakuba kuncike kakhulu embundwini wobuhlungu bomuntu ngamunye, kuthiwa emadodeni kuba buhlungu kakhulu ukudweba ingxenye engaphambili. futhi ingemuva lentamo kunabesifazane, abathinteka kakhulu ngemuva kwentamo.
Isizathu silula: isikhumba esisentanyeni sihle ngokwedlulele futhi sigcwele iziphetho zemizwa, ngakho-ke ubuhlungu lapho uzidweba umzimba bukhona usuku lonke.. Ngaphezu kwalokho, akugcini nje ngokubuhlungu, kodwa kungabangela ubunzima lapho uphefumula ngesikhathi se-tattoo, ukucasuka kwesikhumba ...
Zivame ukunyamalala kalula
Lapho sinquma nge-tattoo yalezi zici, kufanele futhi sicabangele ukuthi cishe izosulwa kalula. Lokhu kungenxa yesikhumba, okuyinto, njengoba sishilo ngenhla, sincane kakhulu, ngakho-ke uma umdwebi we-tattoo esebenzisa ukucindezela okukhulu noma okuncane kakhulu, ikhwalithi ye-tattoo izothinteka. Yini enye, ngokuhamba kwesikhathi isikhumba entanyeni siyakhubazeka futhi silahlekelwe ukunwebeka, okubangela ukuthi i-tattoo ilahlekelwe isimo sayo sokuqala.
Kuthatha isikhathi eside ukuphulukisa
Ekugcineni, ama-tattoos entanyeni avame ukuthatha isikhathi eside ukuphulukisa. Futhi, isizathu esiyinhloko salokhu kwenzeka ngoba isikhumba entanyeni sincane kakhulu futhi, ngaphezu kwalokho, sisendaweni lapho kungenzeka khona ukuthi sigcobe izingubo (isibonelo, ikhola yehembe , ama-scarves, amajazi) noma ngokungenhloso, noma ngisho nokuthi ilanga likhanya ngokuqondile.
Ingabe kunconywa ama-tattoo entamo amadoda?
Nakuba kungase kubonakale ngenye indlela, ama-tattoos entanyeni nawo anezinto ezinhle, njengokuthi anika impilo emiklamo ethile nokuthi apholile kakhulu.. Kodwa-ke, lapha besifuna ukukhuluma ngendaba ukuthi ungasusi isifiso sakho, kodwa ukuze ube nalo lonke ulwazi oluseduze futhi ungathatha isinqumo.
Izindawo ze-tattoo entanyeni
Nakuba izindawo ezizobhalwa entanyeni zivamile kwabesilisa nabesifazane, iqiniso liwukuthi emadodeni kukhona okukhethekile kuye ngokuthi indawo abakhetha ukuyibhala entanyeni. Sizokhuluma ngabo ngezansi:
Ingxenye engaphambili, ngezansi nje kwesilevu nangaphezulu kwe-walnut, iyingxenye ebuhlungu kakhulu yentamo ukuze izidwebe amadoda. Njengoba sishilo, isikhumba sibucayi kakhulu. Endabeni yemiklamo emikhulu, ehla ku-clavicle, ubuhlungu bubi nakakhulu, kusukela kuleyo ndawo isikhumba sibuye sibe mncane kakhulu futhi ithambo litholakala ngokushesha.
Ngokuqinisekile ubonile ukuthi uhlangothi lwentamo lungenye yezingxenye ezidume kakhulu zokudweba tattoo kule ndawo. Ngaphezu kokuvumela imiklamo eminingi kanye nokudonsa amehlo kakhulu, uhlangothi alubuhlungu kakhulu kunengaphambili lamadoda.
Uma sikhuphuka kancane sisuka eceleni kwentamo sithola ngemuva kwendlebe, indawo ekahle yalabo abafuna umklamo ohlakaniphile noma omncane. Nokho, futhi njengoba sike sakhuluma ngezinye izikhathi, iyindawo ebuhlungu kakhulu.
I-nape ingenye indawo ethandwa kakhulu entanyeni lapho ungathola khona ama-tattoos, ngoba iyindawo ehlakaniphile kakhulu evumela ukuthi ubonise imiklamo emikhulu nemincane. Ngokuvamile ubuhlungu lapha buyabekezeleleka, ikakhulukazi emaceleni omabili omgogodla kanye nasemathanjeni. Kodwa-ke, izinto ziyashintsha lapho kufanele udlule phezu komgogodla futhi ungene ngaphansi kogebhezi.
Inketho yokuqala, futhi kamuva nje ithola abalandeli abaningi ngokwengeziwe (yize kufanele kushiwo ukuthi imvelaphi yayo ivela ezizweni eziningi esezivele zikwenza) ama-tattoos ngaphansi kwesilevu, ingxenye yentamo engaziwa kuze kube manje. Ngaphandle kwama-tribal motifs, ukubunjwa kwale ndawo kungaba kuhle kakhulu ukuze uthole okuningi kumklamo, ngaphezu kwalokho, kungenye yezindawo ezibuhlungu kakhulu entanyeni kuya ku-tattoo.
Izinhlobo zama-tattoos entanyeni amadoda
Ama-tattoos entanyeni, kungakhathaliseki ukuthi abesilisa noma abesifazane, zingaba futhi izinhlobo ezahlukene kuye ngokuthi umklamo wakho.
Umklamo omncane owodwa
Imiklamo emincane kakhulu, okungukuthi, ehlanganisa isici esisodwa, basebenze ezindaweni ezisentanyeni lapho bezimele khona ngokwemvelo, isibonelo ngemuva kwendlebe noma entanyeni. Ama-motifs anosayizi ohlakaniphile adume kakhulu ahlanganisa izinsuku, imidwebo emincane yendabuko, ama-initials, izimbali, izinto ... Zivame ukuba mnyama nomhlophe, nakuba zinganikezwa ukuthintwa kombala uma ufuna ukugqama kakhulu.
Umklamo owodwa omkhulu
Umklamo owodwa omkhulu uvame ukuthatha okungaphezu kwentamo. Ngokwesibonelo, Ingathatha ingxenye yomhlane nezinhlangothi zentamo, ukusuka ngaphansi kwesilevu kuye ku-clavicle, ukusuka engalweni kuya ohlangothini ... Ivamise ukuba yimiklamo ekhombisayo futhi emikhulu evelela ngokwazo ngezilwane, izigcawu noma ama-mandala ayinkimbinkimbi. Kwesinye isikhathi iqiniso lize lisetshenziswe ukwenza umklamo ucace nakakhulu, futhi kokubili kungafunwa ukuthi kube nomthelela ngomklamo wombala kanye nokumnyama nokumhlophe.
Izingxenye ezincane ezihlukahlukene
Ekugcineni, tKuvamile futhi kuma-tattoos entanyeni yamadoda ukukhetha izingcezu ezimbalwa ezincane ezihlanganiswe isitayela noma umqondo ofanayo.. Imiklamo emincane yendabuko efana nezinkanyezi, amahange, izinyanga, ama-roses idume kakhulu… Uma ufuna idizayini ehlakaniphile, ungakhetha okumnyama nokumhlophe, nakuba ukuthintwa kombala kungayenza iphile.
I-Man neck tattoos iyizwe lamathuba endaweni ebuhlungu, kodwa ipholile kakhulu. Sitshele, ingabe unawo ama-tattoos kule ndawo? Bekunjani ukuzizwisa kwakho? Yimuphi umklamo owugqokayo noma ongathanda ukuwugqoka?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Ama-tattoo amadoda » Imidwebo yentamo yamadoda, amathuba amaningi nezincazelo
I-Pokémon tattoo: bathole bonke!
Ama-tattoos ephayinaphu: i-plasma lesi sithelo esimnandi esikhunjeni sakho